Huawei Mate 30 Pro horey ayaa loogu iibiyaa Spain | Wararka Gadget
Terminaalka ugu cajiibka badan uguna muranka badan shirkadda Aasiya ayaa durbaba lagu iibinayaa Spain. Si kastaba ha noqotee waxaan kuu haynaa war, waana tan Huawei Mate 30 Pro ee aan falanqeynaynay maalmo yar ayaa lagu iibin doonaa meel gaar ah iyo hal midab. Weel biyo qabow loogu talagalay dadka isticmaala ee si weyn u sugayay terminalkan oo ay saameeyeen sababo siyaasadeed oo aan ku xirneyn shirkadda guud ahaanna ka jawaabeysa rabitaanka hoggaamiyeyaasha qaarkood Noqo sida ay noqon karto, Waxaad horey uga iibsan kartaa Huawei Mate 30 Pro Spain gudaheeda 1.099 euro, ma rabtaa inaad mid hesho? Waxaan kuu sheegeynaa meesha aad aadeyso.
Tani waxay ahayd macluumaadka aan ka helnay ee ku saabsan Huawei Mate 30 Pro:
Huawei maanta waxay iibineysaa iib gudaha Spain Huawei Mate 30 Pro, oo ah taleefanka casriga ah ee ugu casrisan taariikhda shirkadda, kaas oo ay ku abuurtay qaab cusub oo ku saabsan dhinaca taleefanka gacanta. Qalabkan horumarsan waxaa si gaar ah loo iibsan karaa iyon Huawei Madrid Space, Shirkadda Huawei ee adduunka ugu weyn, kuna taal lambarka 48 Gran Vía. Huawei cusub 30 Pro ayaa markii hore la suuq geyn doonaa gudaha Space Silver midabkeedu wuxuu noqon doonaa 1.099 euro.
Haddii aad rabto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Huawei Mate 30 Pro, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad dhex marto falanqaynta aan ku sameynay wada shaqeynta asxaabteena ka socota Androidsis iyo sidoo kale tijaabada qoto dheer ee kamaradda, soo hel wax kasta oo ay Huawei Mate 30 awood u leedahay samaynaya. suurto gal ah terminal ugu premium ee buugga Android.
Furitaanka iyo dareenka ugu horreeya ee Huawei Mate 30 Pro
Dib u eegis qoto dheer oo ku saabsan Huawei Mate 30 Pro
Huawei Mate 30 Pro tijaabada kamaradda
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Huawei Mate 30 Pro horey ayaa loogu iibiyaa Spain
Samsung Galaxy Buds ee kor ku xusan tayada maqalka ee AirPods Pro
Philips Momentum, dib u eegista "kormeerka" ugu weyn "kormeeraha ciyaarta"